WAR CUSUB:Soomaliland oo Xirtay Nin calanka Soomaaliya Hargeysa Dhexdiisa Ku labisan(Halkani Riix Video)
May 14, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 21
Ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland ayaa Maanta Magalada Hargeysa waxa ay ki xireen Wiil Dhalinyaro ah oo ku labisnaa dhar laga tolay dharka Buluuga ah ee Calanka Soomaaliya.
Wiilka oo Magaciisa lagu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cali “Aar” ayaa xirnaa Surwaal iyo Jaakad leh midabka Calanka Buluuga ah ee Soomaaliya,waxaana ka hor xarigiisa uu hanjabaad iyo qeylo kala kulmay qaar ka mid ah Shacabka Magalada Hargeysa.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliland ayaa Wiilkaasi Dhalinyarada ah xiray,isla markaana u dhaadhiciyay Xabsiga Magalada Hargeysa,waxaana u jeedada kaliya ee loo xiray ay tahay qaadashada dharka leh midabka Calanka Soomaaliya.
(Halkani Riix Video)
Soomaaliland ayaa aaminsan inay ka go’aday Soomaaliya inteeda kale,waxaana deegaanada Maamulkaas lagu xiraa dadka loo arko inay taageerayaan Dowladda soomaaliya,haba ugu badnaadaan kuwa ka taga Magalada Muqdisho oo markii hore ka yimid Soomaaliland.
ALLAHU AKBAR, caafimaad baan jirin waxaas oo tacadiyo ah iskama imaan. Yaa Rabbi caafimaad amiin
Waa sa wa xaraan i la xidha calaka bluga ah ki xidhana akhiro aya loo diraya
iidoor wagaashoow dhugta ayaad la’dahay ee calankan aad sidaas u naceybtahay goobtii ugu horreysay ee ciid Soomaaliyeed laga taago Hargeysa ayay ahayd.
Duul taariikhda ka arradan oo been iyo barabagaan qayaxan lagu maandooriyeeyay ayaa meel kasta af khali ah ku kala haya!
Aqoon xumadooda taariikheed 1991kii ma dhaafsiisna. Alloow Alle!
Markay reergalbeedka yimadaan waxay isku dhiibaan inay koonfur kayimaadeen oo ay alshabaab kasoo carareen
Bal khiyaamadaa arka soomaaliyey ay reerwaqooyi isticmaalaan
Waa run haa waxaanu nidhaahnaa xamar ayaanu ka nimid ineen waa meel baaba,daye hadii aan nidhaahno hargeisa ayaan ka nimid ama djibouti waa dal nabada ayaa la odhanayaa
Wadankaan an hadda joogo dad soomaali ah baa xiran dharka maanta ninka loogu xiray maxuu u gashaday.Dhalinyaro iyo waayeelba qofkii rabaa soo gata oo xirta.Cidna ma tiraahdo maxaad u soo xirateen CALANKA SOOMAALIYA.
Calaa kulli xaal arinta hargeeysa waa xad dhaaf oo ma aha wax caadi ah.Hadda ka hor gabar baa lagu xiray in ay tiri xamar way shidan tahay.Macnaha xamar waxbaa kala socda.Cadaawada halkaas gaarsiisan waxaan xumaan ahayn ma keenayso.
Soomaalilaan waa qeyb ka mida soomaaliweeyn.Waana maamul gobaleed ka mida maamul gobaleedya soomaaliweeyn.In ay taasi run tahayna waxaa ka markhaati ah qofkii reer Soomaalilaan ah oo dhoof rabaa waxuu tagaa garoowe ama xamar oo uu ka soo qaataa baasa boorka soomaligaa ee uu xaqqa u leeyahay in uu qaato.Xujayda reer soomaalilaan xattaa madaxdu waxay qaataan somali pass ports.War huu-haada beentaa hala iska daayo.War shacabka reer soomalilaan baa la qaldayaa ee waxaasi ma aha wax suuroobaya.Reer soomaalilaan waxay puntlaan ku leeyahiin ganacsi xoog leh.Dadka soomaaliyeedna lagama yaqaan.Xamar ayada iskadaa waa small hargeeysa.Reer soomaalilaan say rabaan bay soomaaliya uga shaqaystaan una maraan.Waayo dee ayaba waa soomaali.
One somali one Nation.
Horta idinku ma passporka uunbaad la soo yaacdaan waar ka djibouti ama ethiopia waanu is ticmaalana ama soomalia lkn qaranku waa halkiisa
Usheeg dadkan wareersan in ay iyaguba Midgo iyo Reer Banaadiri iyo Reer Baydhabo ayaanu nahay.
Cisho dhaweyd Ayaan ku yar oon Abti u ahay wada sheekaysaneynay. Kolkaas ayay arintan Baasaaboorada eed ka dhawaajisay sheekadayadii soo dhex gashay. Kolkaas Ayaan ku idhi Soomaalida dad badan ayaa heysta Baasaboorada Kenya, Ethiopia, Jabuuti iyo ka Soomaaliyaba. Inika Ogaadeenka ah ee ku dhashay Kenya waxa uu Qaadan karaa, ka Kenyanka, ka Ethiopia iyo ka Soomaaliya. Xitaa ka Jabuuti hadii uu connection heysto wuu qaadan karaa. Kan Isaaqa ahina Sidoo kale. Qabiilo badan oo kale oo isku wada qaadan kara Shanta Baasaboorba wey jiraan.
Usheeg dadkan wareersan in ay iyaguba Midgo iyo Reer Banaadiri iyo Reer Baydhabo ayaanu nahay isku dhiibaan. Soomaali badankeeda wadamada Reer Galbeedka Been isku dhiibta.
Ramadaanka awgeed ayyaa naxariis ahaan loo xidhey ninkan asxaanbaa loo sameeyey waa lala saayireyba kkkkkkkkkkk
meeshu somaliya maaha dee itoobiyana maaha djipoutina maaha talaabiibna maaha ee lasoco
Soomaalida Midnimada Neceb, caafimmaad buuxa Allahayoow Aamiin.
18..may.. waxa edaabta xun oo dhan waa la xidhayaaa.. dhakool xabsiga ha ugu tago.
Somaliland Police… shaqo wanaagsan ayay hayaan.
ma dhar kale oo uu xidho ayuu waayay… waa sheeko kale, Xabsiga liinta ku cab
SOMALILAND”:GOVERNMENT: What if My Dress Offends in (Hargeysa town)?.
(Wear clothing With potentially” offensive slogons or symobols national blue flag)*(Discrimination and people in residential care
(Remember it’s only unlawful discrimination if you’ve been treated unfairly because of: *(HAYBNACAYB)(CALANKA BALUUG/NACAYB)(SOOMAALI/NACAYB)(HAWIYE/NACAYB)(DAROOD/NACAYB)(KOONFUR/NACAYB)
8,000= CIIDANKA QALABKA SIDA LOO DIRO= (HARGEYSA)(BURCO)LANA HOREEYO(CAASIMADA 2AAD”(DALKA HOOYO)(JEEGAANTANA LAGA SAARO)
Waxaan maqlijiray YEBER MADAXWEYNE xanta looma sheego oo qalbi xafida ma laha BALSE waxaan ogaaday in Lola jeeday XAWAADLAHA oo dhan BAAN sirta xafidi karin oo ah siidii GAMBOOL Darwiish oo waa kaa Godax farta ku fiiqay nimanki FIQI afhayeenka u ahaa. *Marka soow waajib ma aha inay ayyaguna dabagalaan oo CARUUR u soo kiraystaan? WBT
value qaadiro . says:
sanka budhka ah eeg 8000 askari ha loodiro budlan ka waraysta xanuunka ka soo gaadha s/land .waar 32000 millateriya ayey leedahay s/land hubkana minyarada budlan ka waraysta tuu calayk nac bakool
Daarood u dira
Isaaq iyo somalidu waa isku isir marka laga reebo daarood
Maraddii aan ku macsuumay ciidda Hargeisa hadhwanaag ee laysoo huwaday markii nala xasuuqayey, waa xaaraan in ay ciidayayadda iyo hawadayadda uriso, Maradii dhagarta, maradii dhiiga, maradii caruur laaya, maradii maato dooxa, maradii dulmiga iyo iyo iyo……………….. Maradda xitaa dadkeedda cunna! Iska bedela maro Faqashta.
Sorry wiilka walal somaliyed, ictiraafki aniga cunay usheega reer buufis.